Cristiano Ronaldo oo go’aamiyay goolkii ugu quruxd badnaa uu dhaliyay xirfadiisa kubada cagta – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo go’aamiyay goolkii ugu quruxd badnaa uu dhaliyay xirfadiisa kubada cagta
Dajiye August 24, 2018
(Juventus) 24 Agoosto 2018. Xidiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa go’aamiyay goolkiisa ugu quruxda badan ee xirfadiisa ciyaareed kubada cagta iyo sababaha ugu weyn ee uu ugu biiray Juventus, inkastoo uu xiiseynayo koox weyn ee koobab badan.
Cristiano Ronaldo ayaa ka warbixiyay in goolkii quruxda badnaa ee laba lugaateyda uu ka dhaliyay Gianluigi Buffon ee Champions League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay inuu ahaa kii ugu quruxda badnaa xirfadiisa kubada cagta.
Ronaldo ayaa qirtay in sacabtunka uu ka helay jamaahiirta kooxda Juventus kadib goolkii uu kaga dhaliyay Juventus Champions League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay inay door weyn ka qaadatay imaatinkiisa Bianconeri, isagoo sheegay inuusan marnaba ku noolaanin xaalad arintan ka qurux badan.
“Nsiib xumo goolkeygii ugu quruxda badnaa waxaan ka dhaliyay kooxdeyda haatan, laakiin haatan waa wax laga soo tagay, fekerkeyga waa inuu ahaa goolkii ugu fiicnaa xirfadeyda kubada cagta”.
Maurizio Sarri oo war aad u wanaagsan u sheegay jamaahiirta kooxda Chlsea kahor kulanka Newcastle United
Real Madrid oo ka warbixisay fikirkeeda kaga aadan in Mbappé ay lasoo saxiixan doonto Isniinta soo aadan